March 2021 – BaHuTuTa
ဇာတ်ရုပ်ပီပြင်ဖို့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါ ထိခိုက်လုမတက်ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့အနုပညာရှင်များ
ကိုယ်တွေသဘောကျနှစ်သက်ရတဲ့အကြမ်းအရမ်းအက်ရှင်ကားတွေ၊စိတ်လှုပ်ရှားစရာဇာတ်ကားတွေဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးဖို့ဆိုတာ တကယ်မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါရိုက်တာတွေကလည်း သေချာရိုက်ကူးပြီး မင်းသား၊မင်းသမီးတွေကလည်း တကယ့်အစစ်အမှန်ကြိုးစားကြလို့သာ ကိုယ်တွေက ဟင်ခနဲ၊ဟာခနဲဖြစ်ရလောက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်လာတာပါ။ဒီလိုအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတွေဖြစ်လာဖို့ ဇာတ်ကားနောက်ကွယ်ကအကြောင်းတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါ။ဇာတ်ကောင်အသွင်ပီပြင်စေဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ပါထိခိုက်ခံပြီးကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေရှိနေပါတယ်တဲ့။ဘယ်အနုပညာရှင်တွေက ဘယ်ဇာတ်ကားအတွက်အပီအပြင်ကြိုးစားခဲ့ကြတာလဲဆိုရင်… Matthew McConaughey ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Dallas Buyers Club ဇာတ်ကားမှာ မင်းသား Matthew McConaughey ပါဝင်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီဇာတ်ရုပ်ပုံဖော်ဖို့အတွက် လေးပတ်တည်းနဲ့ ပေါင် […]
ဆံပင်တွေကျွတ်တာဟာသိပ်ကိုမုန်းတီးနှမြောဖို့ကောင်းတဲ့အရာကြီးပါပဲ… 🙁 1. ဆံပင်အတွက်မှန်ကန်တဲ့ထုတ်ကုန်မျိုးကိုသာအသုံးပြုပါ ကိုယ့်ဆံသားနဲ့သင့်တော်တဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်မျိုး၊ ခေါင်းလိမ်းဆီမျိုးကိုသာသုံးပါ။ ဈေးကြီးတာ ဈေးနည်းတာနဲ့မဆိုင်ပဲ ကိုယ့်ဆံသားနဲ့ကိုက်ညီမဲ့အရာမျိုးကိုရွေးချယ်သုံးတတ်ပါစေ။ 2. စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ချပါ စိတ်ဖိစီးမှုများလွန်းအားကြီးရင်ဆံသားတွေကပိုပြီးအကျွတ်မြန်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဆံသားကျွတ်ခြင်းကို အမှန်တကယ်လျော့ချချင်ရင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှဖြေလျော့ပေးဖို့လိုပါတယ်။ 3. ခေါင်းမခြောက်သေးခင်မှာ မဖြီးပါနဲ့(လုံးဝ) ခေါင်းမခြောက်သေးခင် ရေစိုစိုကြီးဖြစ်နေချိန်မှာခေါင်းလုံးဝမဖြီးပါနဲ့။ ဆံသားကို အမှန်တကယ်ပျက်စီးစေတဲ့အပြင် မခြောက်သေးပဲသုတ်တာဟာသိပ်ကိုဆံပင်အကျွတ်များစေပြီးကြာရင် ထိပ်ကွက်သွားတာမျိုးတွေထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ […]
လုံးဝလက်မထပ်သင့်တဲ့ အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးကံပါလာတဲ့ ရာသီခွင် (၄) ခု
လူတိုင်းလိုလိုဟာ တစ်နေ့ကျရင် ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြသူတွေပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ချို့လူတွေကတော့ အဲလိုမတွေးကြပါဘူး။ ခုဖော်ပြမယ့် ရာသီခွင် ၄ ခုဟာ အရမ်းချစ်တတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ထပ်ဖို့တော့ လုံးဝမသင့်တော်ပါဘူး။ ဘယ်ရာသီခွင်တွေလဲ ကြည့်လိုက်ပါဦး။ (၁) Aries (March 21 – April […]
သမီးလေးသုံးယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့ခပ်လန်းလန်ုး Photo Ideas လေးတွေက
ဖေဖေကြီးရဲ့ Ideas တကယ့်အလန်းစားချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေပါပဲ… #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
မိန်းကလေးတွေအတွက်က ဈေးဝယ်တာနဲ့ ဥပမာပေးပြီးတဲ့နောက် အခုယောကျာ်းလေးတွေအတွက် ဟင်းချက်တာလေးနဲ့ နမူနာပြပါ့မယ်။ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင် ဒီအသက်အရွယ်ကတော့ ဈေးကဝယ်လာတဲ့ အသားလိုပါပဲ။ အတုံးလိုက်အတစ်လိုက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ချက်စားဖို့အတွက် ခုတ်ထစ် ရပါအုန်းမယ်။ အသက် ၂၅ ဝန်းကျင် ဒီအသက်အရွယ်ကတော့ ဟင်းချက်ဖို့ အသင့်ပြင်ဆင်ထားသလိုပါပဲ။ တစ်လုတ်စာအရွယ်ကလေးတွေကို ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေနဲ့ […]
မိန်းကလေးတစ်ယောက် အပျိုကြီးဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းများ
ခုခေတ်မှာ လူငယ်တွေဟာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ကို ငြင်းဆိုလာတတ်ကြပါပြီ။ ဟိုအရင်ခေတ်တွေတုန်းကလို အချိန်တန် အိမ်ထောင်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေဟာလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပျောက်ကွယ်လာခဲ့ပါပြီနော်။ လူငယ်တွေထဲမှာမှ မိန်းကလေးတွေ အိမ်ထောင်မပြုပဲ အပျိုကြီဖြစ်သွားရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေ ရှိလို့နေပါတယ်။ ဘယ်လိုအချက်တွေက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အပျိုကြီးဖြစ်သွားစေတာလဲ။ တစ်ယောက်တည်း နေရတာကို ခုံမင်သွားလို့ လူတွေဟာ အစပိုင်းမှာတော့ တစ်ယောက်တည်း […]
ပုရိသတွေရဲ့စိတ်ကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး မိန်းကလေးပုံစံ (၅) မျိုး
မိန်းကလေးတွေနဲ့ ယောကျာ်းလေးတွေဟာ တွေးခေါ်ပုံချင်း၊ အမြင်ချင်းမတူကြပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေက ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက် ကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားလာဖို့၊ ပြန်ပြီး သဘောကျလာဖို့အတွက် ခက်ခဲပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့နည်းလမ်းတွေကို လိုက်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာ ယောကျာ်းလေးတွေကတော့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဒီလိုမျိုး ရိုးရှင်းတဲ့အချက်လေးတွေကို သဘောကျနေကြတာမျိုးပါ။ (၁) မိတ်ကပ်နည်းနည်းလေးပဲလိမ်းထားတာမျိုး မိန်းကလေးတွေက မျက်နှာကိုအသေးစိတ်ခြယ်သတာက ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ယူဆပြီး မိတ်ကပ်တွေတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်လိမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ ယောကျာ်းလေးတွေက […]
တစ်ပတ်တာအားလပ်ရက်လေးဖြစ်တဲ့ စနေတနင်္ဂနွေမှာ ကိုယ့်အလှအပနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေလုပ်ဖြစ်ကြလဲ ပျိုမေတို့ရေ။တစ်ပတ်လုံးလုံးမိတ်ကပ်တွေတင်ထားတဲ့ကိုယ့်မျက်နှာလေးကို ဖူးစင်နုအိနေအောင် အားလပ်ရက်လေးမှာပေါင်းမတင်ချင်ကြဘူးလား။ပျိုမေတို့အတွက် လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းလည်းဖြစ်၊ထိရောက်မှုလည်းအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ DIY Face mask လေးအကြောင်းမျှဝေပေးမယ်ဆိုရင် စိတ်မဆိုးလောက်ဘူးထင်ပါရဲ့။ ဒီတော့တစ်ပတ်တာအားလပ်ရက်၊ပိတ်ရက်လေးမှာ ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်လည်းလုပ်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်း mask လုပ်နည်းလေးတွေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်လို့ ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ အစုံအလင်လိုအပ်ပါတယ်။ Diy Strawberry face mask ဒိန်ချဉ် ခွက်လေးပုံတစ်ပုံ ပျားရည်စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်း […]
နေ့စဉ်ဘဝမှာ မဖြစ်မနေ လှုပ်ရှားသက်ဝင်နေတဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အချစ်ရေး စတဲ့ အရေးပေါင်းများစွာကြား သင်ဟာ စိတ်ဖိစီးမှု၊ ငြီးငွေ့ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေကို တစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ်တော့ ခံစားဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအချိန်တွေမှာ အဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုဆိုတဲ့ အရာကြီးကို တွန်းဖယ်ပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွစွာ ပြန်လည်နေထိုင်ချင်ရင်တောင် အဲ့ဒီအရာကြီးက ခပ်လွယ်လွယ်တွန်းထုတ်ဖယ်ခွာနိုင်တာမျိုး မဟုတ်တာကြောင့် တစ်ဖြည်းဖြည်း နည်းပါးသွားအောင် […]
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသည် စေတီပုထိုး၊ ဘုရားဆင်းတုတော်၊ သံဃာတော်များ၊ မိဘဆရာ၊ သက်ကြီးဝါကြီး များကို ရှိခိုးကန်တော့ခြင်းသည် ဓလေ့ထုံးစံတစ်ခုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရခြင်းထက် ပိုပါသည်။လုပ်ဆောင်အပ်သော ဝတ္တရား၊ လိုက်နာပြုကျင့်ရမည့် ဆက်ဆံရေး၊ ဂုဏ်ယူဖွယ် လူမှုစရိုက်၊ သိမ်မွေ့ရိုကျိုးသည့် ယဉ်ကျေးမှု အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားရှိရခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဧ။် အဓိကထမ်းဆောင်ရမည့် အထူးတာဝန်ကြီးတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်သည်။ မွေးဖွားလာပြီး […]